11-04-2008 10:44 AM #11
အစ်ကို ဘာပုံကို များလိုချင်လည်း မသိဘူး..
ကျွန်တော် သိပ်နားမရှင်းလို့ပါ.... ဆော်ရီးနော်
11-06-2008 01:45 PM #12
11-22-2008 05:51 PM #13
formwork အတွက် qs ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါအုန်း အစ်ကို ။
12-11-2008 01:18 PM #14
QS သီးသန့် တွက်လို့ရတဲ့ Software များရှိလား မသိဘူး အကို...
12-17-2008 07:33 PM #15
ဆော်ရီးပါနော်... အလုပ်မအားလို့ စာပြန်တာနောက်ကျသွားပါတယ်..
Formwork ကိုတွက်တာက Drawing ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ material ကိုတွက်ထုတ်တာကတော့ ရှင်းပါတယ် ကျောင်းက သင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်.. (အဟီးး .. နောက်တာ.) သစ်သားထုတို့ အထပ်သားတို့ကို တွက်ယူချင်တယ် ဆိုရင်ပြောတာပါ။ drawing အတိုင်းလိုက်ပြီး တစ်ခုခြင်းဆီ တွက် နိုင်ပါတယ်..။ ဒီမှာ ကန်ထရိုက် အပြီးယူတာကျတော့ formwork ဘယ်လောက် ကျမလည်း ဆိုတာဘဲ တွက်ယူပါတယ်.. formwork ရဲ့ Area ကိုတွက်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ material ကို ရိုးရိုး လွယ်ကူတာဆိုရင် $3 ကနေ $5 အထိ ယူပါတယ် .. လှေကားတွေ ဘာတွေ ခက်ခဲမယ် နောက်ပိုင်း 1 time used ဖြစ်မယ်ဆိုရင် $20 ၀န်းကျင်လောက် ယူပါတယ်.. labor ကတော့ $18 ယူပါတယ် 1 m2 အခုဈေးကိုပြောတာပါ.. ..
Software ကတော့ autodesk ကနေထုတ်တဲ့ Estimate တွက်တွဲ့ ဟာတွေတော့ ရှိပါတယ်.. ကျန်တော်လည်း မသုံးဘူးပါဘူး သူကအကုန့်အသတ်နဲ့ဘဲ တွက်လို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော့် စီနီယာက ပြောပါတယ်။ များသောအားဖြင်ကတော့ Excel ကိုဘဲသုံးကြပါတယ်..
12-29-2008 06:56 PM #16
Estimate ကို Paper Work သမားတွေတွက်ချက်ကြတဲ့အခါ Form တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်း သိပ်ပြီးတော့ကွာခြားလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ နေပြည်တော်တိုင်း၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှာ ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ပြိးတင်ပြအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Estimate Form ပုံစံတွေကိုလေ့လာနိုင်အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပင်မအဆောက်အဦအပါအ၀င်၊ Additional Work လုပ်ငန်းအားလုံးကိုဒီပုံစံကိုပဲ အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကုမ္ပဏီနဲ့ GE ဘက်က Estimate Form တွေတော့နည်းနည်းကွဲလွဲမှုရှိပါတယ်။ GE ဘက်ကတစ်ချို့ Estimate တွေ Form ပုံစံကိုမသုံးကြဘူး။ အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်ဇယားမှာပါတဲ့ သွယ်ဝိုက်စရိတ်ဆိုယင်တော့ပင်မအဆောက်အဦကလွှဲယင် ကျန်လုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့အကျုံးမ၀င်ပါဘူး။ ကျန်ပုံစံကလေးတွေကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။
01-03-2009 06:55 PM #17
ဟုတ် လေ့လာချင်ပါတယ်.. ဆို ဖွင့်မရပါဘူး ဂျာ......... &gt;
01-13-2009 10:29 AM #18
Sorry ပါ ကို Mu Si ရေ---- မရောက်ဖြစ်တာကြာလို့ အကြောင်းမပြန်ဖြစ်တာပါ။ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် Upload လုပ်တာအမှားအယွင်းရှိသွားလို့ အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာပါ။ အခုပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါဦး။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။အဆင်မပြေယင်ပြန်ပြောပါဦး။ အဆောက်အဦ အတိုင်းအတာက 220&#039;x220&#039; ပါ။ အမြင့်ကတော့ 36&#039; upto plinth ပါ။ အဆောက်အဦအကြမ်းထည်အတွက်ပါပဲ။ Finishing လုပ်ငန်းများမပါသေးပါ။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တွက်ချက်မှုကိုနည်းနည်းထွားထားပါတယ်။Drawing ကနည်းနည်းအခက်အခဲရှိလို့ နောက်အဆင်ပြေယင်တင်ပေးပါ့မယ်။
01-19-2009 01:32 PM #19
I&#039;m one of engineer.
I take interest in excel format.
Please teach me how to do the data that containing in &quot;content sheet&quot;.
I mean that &quot;description column with under line and if I click it can go it&#039;s link.
teach me pls.
I&#039;m waiting for your reply.
If you don&#039;t any case please send my mail that aungkhaing0077@gmail.com
I&#39;m welcome for any suggestion for any case.
I&#39;m so glad as I meet you in here.
02-14-2009 05:46 PM #20
ကိုအောင်ခိုင်ရေ.. ကျန်တော်လဲ ရွာပြန်နေတာနဲ့ မအားလို့ အကြောင်းမပြန်ဖြစ်တာ ဆော်ရီးပါဗျာ....
excel မှာ လုပ်ချင်တယ် ဆိုတာ hyperLink ကိုပြောတာ ထင်တယ်နော်...
အောက်မှာ ပုံလေးနဲ့ ပြထားပါတယ်နော်..
ပထမဆုံး ကိုလုပ်ချင်တဲ့ စာမျက်နှာမှာပေးချင်တဲ့ ဆဲလ် မှာ.. select ပေးပြီး တော့ insert =&gt; hyperlink ကိုသွားပါ.. အဲဒီမှာမှ တဆင့်.. ကိုယ့်လုပ်ချင်တဲ့ function ကိုရွေးပြီး လုပ်လို့ရပါတယ်... ကျွန်တော်လဲ သိပ်မရှင်းပြတပ်လို့ပါ.. လုပ်ကြည့်ပါ ရပါတယ် အဲဒီကနေဘဲ.. link to ကနေပြီးတော့ place in this document ကိုသွားပါ.. ပြီးရင် sheet တွေကို ရွေးပေးလိုက်ပါ.. စမ်းကြည့်ပါအုန်း အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်..အောက်မှာ နမူနာ ပုံလေးနဲ့ ဖိုင်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အဲဒါရသွားဘီဆိုရင် အရင်က ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ claim ဖိုင်လေးကို ထပ်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ.. အဲဒီမှာ hyperlink နဲ့ function လေးတွေပါပါတယ်... မရရင် မရတဲ့နေရာလေးပြောပါ တပ်သိသလောက် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်.....
အဟတ်ဟတ်... ကိုရေခါးကြီးက ဖိုင်ပေးမတင်ဘူးဗျ... ဒုတ်ခပါဘဲဗျာ...